सरकारी अस्पतालमै ‘डेंगु परीक्षण शुल्क’ असुल गरिँदै, सरकार बेखवर
निशान न्युज भाद्र २९, 2076
काठमाडौं । डेंगु परीक्षणका लागि कीट प्रयोग नगर्न सरकारले रोक लगाए पनि निजी तथा सरकारी अस्पतालले यसैको नाममा रकम असुल्दै आएका छन् ।
हालसम्म ५६ जिल्लाका ५ हजार ९७ जनालाई डेंगु संक्रमण भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। विवेककुमार लालले बताए । महाशाखाका निर्देशक डा। लालले कुन व्यक्तिमा कुन प्रकारको भाइरस हो भनेर कीटले थाहा नहुने भन्दै डायग्नोसिसका लागि कीट आवश्यक नपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘ह्वाइट ब्लड सेल काउन्ट र टोटल प्लेटलेट काउन्टकै आधारमा डेंगुको पहिचान गर्न सकिन्छ । यस्तै, लक्षणका आधारमा व्यक्तिको उपचार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
५६ जिल्लाका ५१ सय संक्रमित
ह्वाइट ब्लड सेल काउन्ट, टोटल प्लेटलेट काउन्ट र हेमाटोक्रिट जाँच गरियो भने डेंगु भएको हो या होइन जानकारी हुन्छ । यस्तै, जाँचसँगै लक्षणलाई आधार मानेर डेंगु पत्ता लगाउन सकिने चिकित्सकको भनाइ छ । चिकित्सकका अनुसार रगत परीक्षणका क्रममा ह्वाइट ब्लड काउन्ट ४ हजारभन्दा कम र प्लेटलेट काउन्ट १ लाख वा सोभन्दा कम देखिन सक्छ ।
सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट ट्रपिकल मेडिसिन डा. अनुप बाँस्तोलाले डेंगु परीक्षणका लागि कीट आवश्यक नपर्ने बताए । कीटमा चरम राजनीति भएको भन्दै उनले भने, ‘प्रकोपका रूपमा डेंगु फैलिएको छ । त्यसकारण, कीट जरुरत छैन । डब्लूबीसी काउन्ट, प्लेटलेट काउन्ट, हेमाटोक्रिट परीक्षण गर्ने र लक्षणका आधारमा डेंगु भएको हो या होइन, पहिचान हुन्छ ।’
डेंगु ज्वरो एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो । डेंगुको भाइरसबाट संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइले यो रोग सार्छ । यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो मात्र टोक्ने गर्छ । वर्षाको समय सुरु भएपछि डेंगु ज्वरोको प्रकोप बढ्न थाल्छ ।
ज्वरो आउनु, आँखाको गेडी दुख्नु, शरीरमा डाबर आउनु, बेस्सरी टाउको दुख्नु, जोर्नी तथा मांसपेशी कडा रूपमा दुख्नु, पेट तथा आन्द्रामा गडबडी हुनु डेंगुका लक्षण हुन् । डेंगु संक्रमितको संख्या अझै बढ्ने चिकित्सकले बताएका छन् ।
सरकारले डेंगु रोकथामका लागि १० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका लागि १ करोड ६७ लाख, प्रदेशका लागि ६ करोड १७ लाख र केन्द्रका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो रकम ‘खोज र नष्ट गर’ जनचेतना अभियानका लागि खर्च भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । तर, सो रकम केही जिल्लामा प्रयोगमा आउन नसकेको पाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
दुर्गा पुजाको दिन डाक्टर साबको चेतावनी : फेरि सत्याग्रह बस्छु
काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि पटकपटक अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रह...
चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट दुईको मृत्यु, ९९ संक्रमित
चितवन । जिल्लाका अस्पतालमा साउनयता उपचार गराउन आएकामध्ये स्क्रब टाइफसका कारण दुई जनाको मृत्यु भएक...
दशैं तिहारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुचारु हुने
काठमाडौं । सरकारले नेपालीको महान पर्व दशैं तिहारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिए...
नियमित रूपमा पालुंगो यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउनुस्
काठमाडौँ । हरियो सागको कुरा गर्दा पालुंगोको उल्लेख भइहाल्छ । यो त रामवाण नै हो भन्दा हुन्छ । पालु...
आइओएम एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित
काठमाडौं । त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा सा...
कास्कीले पायो ‘पुष्पराज कर्णिकार रनिङ शिल्ड’
काठमाडौं । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले यस वर्षको ‘पुष्पराज कर्णिकार रनिङ शिल्ड’ कास्की शाखाल...